ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့သူကို ထိမိစွာနဲ့ ပြောဆိုချေပလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည် – Online News Post
ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့သူကို ထိမိစွာနဲ့ ပြောဆိုချေပလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ရွှေအိမ်စည် က တော့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ကျော်ကြားတောက်ပ နေတတ် တဲ့ အလှမယ် မင်းသမီး တစ်လက် ပါပဲနော် ။ အိမ်စည် က တော့ယောကျာ်းလေး တွေသာမ က မိန်းကလေးချင်း ကပါအားပေး ချစ်ခင်ခြင်း ခံရတဲ့ အလှမယ် လေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အပြင် အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီးတွေလည်း ရိုက်ကူး နေရ သူ တစ်ယောက် ပါ ။
အိမ်စည် က တော့ (2018) မှာ လည်း Miss Supranational Myanmar Winner ဆုကို ရရှိ ခဲ့တဲ့ အပြင် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သူ လေးလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အိမ်စည် က တော့ သူမှန်တယ် ထင်ရင်ယုံကြည် ချက်ရှိစွာ ပြောဆိုမှု ကြောင့် ဝေဖန် တိုက်ခိုက် မှုတွေကို မကြာခဏ ခံရတတ် ပေမယ့် ဘာကို မှဂရုမစိုက်ဘဲ သူမရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စတိုင် အတိုင်း သူမရဲ့ ထင်မြင်ချက် တွေကို ပရိသတ် တွေနဲ့ ဝေမျှဆွေးနွေးလေ့ ရှိသူ တစ်ဦး ပါ ။
လက်ရှိ မှာလည်း သူမအား ရိုင်းစိုင်းစွာ မန့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ပရိသတ်တစ်ဦးအား ချက်ချင်း တုန့်ပြန်ပြော ဆို ခဲ့တာပါ ။ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ မန့်ခဲ့ သူကို နင့်နှမကို ကျွေးကြည့် လို့ပြန်လည် ကာ ထိထိ မိမိမန့်ခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ် ။ ဖတ်ရှုပေး ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆု တောင်းပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
source : Shwe Eain Si
ေရႊအိမ္စည္ က ေတာ့ နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားေတာက္ပ ေနတတ္ တဲ့ အလွမယ္ မင္းသမီး တစ္လက္ ပါပဲေနာ္ ။ အိမ္စည္ က ေတာ့ေယာက်ာ္းေလး ေတြသာမ က မိန္းကေလးခ်င္း ကပါအားေပး ခ်စ္ခင္ျခင္း ခံရတဲ့ အလွမယ္ ေလး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အျပင္ အခုဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႀကီးေတြလည္း ရိုက္ကူး ေနရ သူ တစ္ေယာက္ ပါ ။
အိမ္စည္ က ေတာ့ (2018) မွာ လည္း Miss Supranational Myanmar Winner ဆုကို ရရွိ ခဲ့တဲ့ အျပင္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ နိုင္ခဲ့သူ ေလးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အိမ္စည္ က ေတာ့ သူမွန္တယ္ ထင္ရင္ယုံၾကည္ ခ်က္ရွိစြာ ေျပာဆိုမႈ ေၾကာင့္ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ မႈေတြကို မၾကာခဏ ခံရတတ္ ေပမယ့္ ဘာကို မွဂ႐ုမစိုက္ဘဲ သူမရဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ စတိုင္ အတိုင္း သူမရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ ေတြကို ပရိသတ္ ေတြနဲ႔ ေဝမၽွေဆြးေႏြးေလ့ ရွိသူ တစ္ဦး ပါ ။
လက္ရွိ မွာလည္း သူမအား ရိုင္းစိုင္းစြာ မန႔္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ပရိသတ္တစ္ဦးအား ခ်က္ခ်င္း တုန႔္ျပန္ေျပာ ဆို ခဲ့တာပါ ။ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရိုင္းစိုင္းစြာ မန႔္ခဲ့ သူကို နင့္ႏွမကို ေကၽြးၾကည့္ လို႔ျပန္လည္ ကာ ထိထိ မိမိမန႔္ခဲ့ တာျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဖတ္ရႈေပး ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံး သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ ကို ပိုင္ဆိုင္ နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် စပါယ်ရှယ် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး နွယ်နွယ်ထွန်း
Next post အဓိပ္ပါယ်ပါလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေကြောင့် အများရဲ့ထင်မြင် စနောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ မင်းမော်ကွန်းနဲ့ ထွန်းထွန်း